Chan Hein Aye From Soundcloud - Mp3Vadisi.org
1. Ray LaMontagne - Jolene (Live Acoustic)
By Chan Hein Aye
Cocaine flame in my bloodstream Sold my coat when I hit Spokane Bought myselfahard pack of cigarettes in the early morning rain Lately my hands they don't feel like mine My eyes been stung with dust and blind Held you in my arms one time Lost you just the same Jolene I ain't about to go straight It's too late I found myself face down inaditch Booze in my hair Blood in my lips A picture of you holdingapicture of me In the pocket of my blue jeans Still don't know what love means Still don't know what love means Jolene Been so long since I seen your face Or feltapart of this human race I've been living out of this here suitcase for way too long A man needs something he can hold onto A nine pound hammer orawoman like you Either one of them things will do Jolene I ain't about to go straight It's too late I found myself face down inaditch Booze in my hair Blood on my lips A picture of you holdingapicture of me In the pocket of my blue jeans Still don't know what love means Still don't know what love means Jolene Jolene Jolene ...........
2. ငြင်းပယ်မှာဘဲ စိုးမိတယ် - ကိုသန်းလှိုင်
နီးဘို့ရာအခြေမပေး ဝေးတဲ့အခါများမယ် .. သူ့ကိုသာ သတိတရရှိလှတယ် ... အချစ်ရယ်ယုံကွယ် ပိတောက်ဝါပွင့်ဖူး သည်နွေတန်ခူးဝယ် ... ခြွေခူးလို့ ပန်ပေးချင်တယ် စံပယ်တွေပွင့်တော့လည်းသည့်နှယ် ..... သဇင်တွေပွင့်တော့လည်းသည်နှယ် မှန်းဆတမ်းတမိသေးတယ် ..... သူ့ကိုသာပြန်လည်တွေ့ယင် တကယ့်ကိုပြောပြမယ် ရင်မှာသိမ်းထားတဲ့ အချစ်စကားလေးတွေ နားထောင်မှာလားအချစ်ရယ် ... ငြင်းပယ်မှာဘဲစိုးမိပါတယ်။
3. မိုးမချုပ်မီ - ဟန်ထွန်း (၂၀၀၂)
မိုးမချုပ်မီ - ဟန်ထွန်း
4. ချစ်စရာလေးပါ - လှိုင်ဦးမော်
5. အချစ်ဆိုတာ - စိုင်းဆိုင်မောဝ်
6. တံတိုင်းကြီးခြား - ဖိုးကျော်
တံတိုင်းကြီးခြားသွားတဲ့ငါ့ဘဝ မဆုံအောင် ဝေးသထက်ဝေးလို့သွား အတိုင်းအဆမဲ့ငါ့အချစ်တွေ ဆုံးရှုံး မျှော်လင့်ထားတဲ့ ငါ့စိတ်ကူးအိပ်မက် ပင်လယ်လှိုင်းအောက်နစ်မြုပ်သွား တံတိုင်းကြီးခြားတဲ့ငါ့ဘဝ တံတိုင်းခြား ....
7. အမှန်သိခွင့် - ဒိုးလုံး
8. ရုံးတော်မှအပြန် - ကိုင်ဇာ
__________________ အင်မတန်မှ ... ချစ်ပေမယ့် ကံတရားရဲ့ အတိုက်အခိုက်များ ဘယ်လိုမှ ... မတွန်းလှန်သာ နာရီစင်ကြီး သီချင်းညည်းဆို ___________________
9. မင်းမရှိလို့မဖြစ်ဘူး - ဇော်ဝင်းရှိန်၊ဂျော်နီ
နှလုံးသားမြို့နဲ့မိုင်ပေါင်းများစွာကို ဥပေက္ခာပြုအချစ်လေးသွားနေမှာလား ဒီမှာလေအချစ်များ အဖျားတက်နေပြီ တော်တန်ရုံလူလည်း ဆေးကုလို့မရဘူး ... ကိုယ်ရူးနိုင်တယ် .... ကြာလာယင်ကိုယ်လေဒီထက်ဆိုးလာနိုင်တယ် ကြင်နာသူရယ်တစ်ယောက်တည်းထားပြီး ကိုယ်နဲ့အဝေးကြီးအဝေးကြီးထွက်မသွားနဲ့ကွယ် အချစ်ကလေး ကိုယ့်ရဲ့နံဘေးအနားမင်းလေးမရှိလို့မဖြစ်ဘူးကွယ် ...
10. ကွတ်ခိုင်က ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် - စိုင်းဆိုင်မောဝ်
11. ကျောင်းသားအထုပ္ပတ္တိ - ရွှေဘုန်းလူ
“ကောင်းမွန်စွာ သင်္ဂြိုဟ်ပြီးစီးပါကြောင်း” .. တဲ့ အလောင်းကိုမှ မမြင်ရ မတွေ့ရ ဘယ်နေရာမှာ ကျဆုံးခဲ့သလဲ ညီလေးရယ် ဒေါင်းရုပ်ကလေးလိုပဲ မင်းရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိဟာ အတောင်ပံပါတယ် တိုက်ပွဲဝင်တယ် နွယ်လိုပတ်ချည် ခိုင်ကျည်နစ်စူး ရောက်လေရာဘ၀အဆက်ဆက်မှာ မင်း.. မော်ဖူးရခြင်းများစွာနဲ့ ကင်းဝေးပါလိမ့်မယ် ...
12. မေ့ပါနိုင် - ပြည်လှဖေ
13. စာအုပ် - ဟယ်ရီလင်း
14. လ - ဇာဂနာ
15. မိုးသက်လေနှင် - ကိုစောညိန်း
16. ဂန္ထဝင်ဆည်းဆာ - တာရာ
17. သီချင်းဆို၍ ဒုက္ခပေးပါမည် - မားဆိုး
ကြယ်ကြွေညတိုင်း မောင်မူးမယ် - လွှမ်းဆိုး
18. ဇွတ်မေ့လိုက် - စိုင်းဆေနော်
အို .. နောက်နေ့အတွက် ပြုံးပါလား ခုမှဖြင့် ရှိုက်မနေနဲ့ လွမ်းစနဲ့ အဆွေးတွေဖယ် အိုး ... အချစ်ရယ် ... နောင်တွေ့ရမယ့် အဖြစ်တွေအတွက် ကြုံတွေ့ခဲ့သမျှ အဖြစ်တွေက ဇွတ်မေ့လို့ ထွက်ခဲ့ကွယ် လင်းအရုဏ်သို့ရွယ် ။ ဒီသံသရာ ဒီဝဲရယ် အဖန်တစ်ရာရှည်ဦးမယ် ဘယ်ခါမှ လွတ်ကင်းမယ် မျှော်လင့်ချက်အတွက် မီးအိမ်လေး အရှုံးသမားရဲ့ မျက်ရည်နဲ့ ခမ်းခြောက်လို့ ညှိမ်းခဲ့ပြီ အို .. အချစ်ရယ် ကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့ အတိတ်ကိုလည်း မင်းတမ်းတလို့လွမ်းမနေနဲ့ ဇွတ်မေ့လို့ထွက်ခဲ့ကွယ် လင်းအရုဏ်သို့ရွယ် ... ဒီသံသရာ ဒီဝဲရယ် အဖန်တစ်ရာရှည်ဦးမယ် ဘယ်ခါမှ လွတ်ကင်းမယ်
19. အားနည်းချက် - J Mg Mg
စီးကရက်တစ်လိပ် .. မီးညှိပြီး ရှိုက်လို့ဖွာနေဆဲ မီးခိုးလေးတွေဟာ မင်းဖြစ်လာတယ်၊ မင်းဖြစ်သွားတယ် လေနဲ့ ကိုယ်မှုတ်ထုတ်ပစ်လို့ဘို့... အင်အားကိုယ့်မှာ မရှိခဲ့ပါ။
20. အဆိပ်ငွေကြေး - ဃ
အမှန်တရားဟာ အဖိုးထိုက်တန်လွန်းတယ် ကိုယ်မဝယ်နိုင်ဘူးလေ ... ငွေဟာအဆိပ်တွေ အမှန်တရားဟာ အဖိုးထိုက်တန်လွန်းတယ် ခံစားမှုသားကောင် အားလုံးလွဲမှားကြတယ်။ (ဝင်းမင်းထွေး)
Ollie From The Skoogie
A B Tho
Ali Ihsan Zt Rk
Jai Ho Full Movi
Ng Xu N Nghi M
Chris Michael 3
2 Bit Shakur
Jason Frisby 2